Hair Removal (Waxing pros and cons) - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Hair Removal (Waxing pros and cons)
Waxing လုပျတာ ကောငျးတာလား၊ မကောငျးဘူးလား?
အခုခတျေမှာ မိနျးကလေးဖွဈရတာကံကောငျးလာပါတယျ။ မိနျးကလေးသဘာဝ အလှအပကိစ်စတှကေို လှယျလှယျကူကူလုပျဆောငျနိုငျလာတယျ။ ခတျေမှီနညျးတှအေမြားကွီးပျေါလာတယျ။
အရငျကဆို ခွသေလုံးမှေး၊ လကျဖြံပျေါက အမှေးတှေ ရှညျတဲ့ မိနျးကလေးတှဆေိုရငျလုံခညျြ၊ ဘောငျးဘီအရှညျဝတျ၊ အကြီင်္ အရှညျဝတျမလား? ဒီအမှေးတှကေို ၃ရကျခွားတဈခါလောကျကိုထိုငျရိတျနရေမလားအပွငျ အဖွမေရှိခဲ့ပါဘူး။အခုကတြော့ Waxing လို့ချေါတဲ့ စေးကပျတဲ့ ဖယောငျး ( သို့) သကွား နဲ့ ပြားရညျအရောကို ကိုယျမလိုလားတဲ့အမှေးရှိတဲ့နရောကို အမှေးမရှိအောငျ အကှကျလိုကျ နှုတျပဈတာမြိုးတှေ ပါလုပျလို့ရလာပါတယျ။
Waxing လုပျလို့ရတဲ့ပစ်စညျးတှဖွေဈတဲ့ အပူပေးလို့ရတဲ့ ဖယောငျးဘူး၊ အပူပေးတဲ့ ကိရိယာ၊ waxing strip လို့ ချေါတဲ့ wax ဖယောငျးကိုအသားပျေါကပျပွီးရငျ ကပျပွီးခှာလို့ရတဲ့ စက်ကူအမာပွားလေးတှဟော စတိုးဆိုငျတျော တျောမြားမြားမှာ အလှယျတကူရလာလို့ တဈခြိူ့အလုပျမြားတဲ့လူတှဆေိုရငျ ဆိုငျမသှားဘဲ အိမျမှာပဲ ကိုယျ့ဘာသာကိုယျWaxing လုပျလာကွပါတယျ။Waxing တှငျတှငျကယျြကယျြလုကျလာကွတဲ့အခါ ဘာတှသေိထားရမလဲဆိုတာ လိုလာပါပွီ။
ခဏခဏလုပျဖို့မလိုဘူး၊ တဈခါ waxing လုပျထားရငျ အမှေးပွနျပေါကျဖို့ ၃ပတျလောကျထိကွာတယျ။
ကွာရငျ မလိုတဲ့အမှေးတှေ အထှကျနှေးလာသလို။ ပါးလာမယျ။ (သူက မှေးညှငျးပေါကျတှကေို ပကျြစီးစလေို့ပါ)
ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုရှိစတေယျ။ ( ကိုယျ့ အမှေးတှအေတှကျ စိတျပူစရာမလိုတော့ဘူးလေ)
အမှေးရိတျသလို ဓားထိမှာ၊ အမှေးငုတျစိလေးတှကေနျြခဲ့မှာမပူရဘူး။
အလအေ့ကငျြ့ရှိသှားရငျ အိမျမှာတငျ အခြိနျ ၁၀ မိနဈလောကျပေးလုပျလို့ရတယျ။
ခွသေလုံးမှေး၊ ဂြိုငျးမှေး၊ လကျဖြံမှေးအပွငျ Bikini ဝတျတဲ့ မမတှအေတှကျ Bikini Waxingလို့ချေါတဲ့ဆီးခုံပျေါက အမှေးတှကေိုပါ ဖယျရှားနိုငျတယျ။
အမှေးတှကေို တဈခကျြထဲ ( waxing Strip တဈပွားထဲ) ဗွနျးကနဲ့ ဆှဲခှာလိုကျတာဆိုတော့ တှေးကွညျ့စရာမလိုအောငျကို နာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အမြားအားဖွငျ့လုပျတဲ့နရောတှကေ အသားနုတှမေဟုတျလို့ ဒီနာတာလောကျကို ခံနိုငျရရှေိကွပါတယျ။
သဘာဝပစ်စညျးတှကေို အခွခေံလုပျထားလို့ ( အိမျသုံးသကွား၊ ပြားရညျနဲ့တောငျလုပျလို့ရတာမို့)အကွမျးအားဖွငျ့ အခွား အမှေးကြှတျတဲ့ ခရမျတှလေောကျမဟုတျပမေယျ့ မှေးညှငျးပေါကျတှပေကျြစီးစပေါတယျ။
Strip ပွားခှာတဲ့အခြိနျမှာ အားနညျးရငျ အမှေးမပါနိုငျသလို၊ အားမြားရငျ မှေးညှငျးပေါကျနရောကသှေးထှကျနိုငျပါတယျ။
ကိုယျ့ဟာကိုယျမလုပျရဲတဲ့သူတှအေဖို့ ဆိုငျကို အခြိနျပေးသှားပွီး လုပျရမှာဖွဈပါတယျ။
အမှေး ငုတျတိုလေးတှဆျေု လုပျမရသလို၊ လိုအပျတဲ့အရှညျကိုစောငျ့ရတာမို့ ကွားထဲမှာ သှားစရာရှိလို့ဆိုရငျတော့ Waxing လုပျမရနိုငျပါဘူး။ကဲ ဒီလောကျဆို Waxing အကွောငျး ကောငျးမကောငျးသိပွီလို့ ယူဆပါတယျနျော။
Waxing လုပ်တာ ကောင်းတာလား၊ မကောင်းဘူးလား?
အခုခေတ်မှာ မိန်းကလေးဖြစ်ရတာကံကောင်းလာပါတယ်။ မိန်းကလေးသဘာဝ အလှအပကိစ္စတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်ဆောင်နိုင်လာတယ်။ ခေတ်မှီနည်းတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။
အရင်ကဆို ခြေသလုံးမွှေး၊ လက်ဖျံပေါ်က အမွှေးတွေ ရှည်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုရင်လုံချည်၊ ဘောင်းဘီအရှည်ဝတ်၊ အကျီင်္ အရှည်ဝတ်မလား? ဒီအမွှေးတွေကို ၃ရက်ခြားတစ်ခါလောက်ကိုထိုင်ရိတ်နေရမလားအပြင် အဖြေမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုကျတော့ Waxing လို့ခေါ်တဲ့ စေးကပ်တဲ့ ဖယောင်း ( သို့) သကြား နဲ့ ပျားရည်အရောကို ကိုယ်မလိုလားတဲ့အမွှေးရှိတဲ့နေရာကို အမွှေးမရှိအောင် အကွက်လိုက် နှုတ်ပစ်တာမျိုးတွေ ပါလုပ်လို့ရလာပါတယ်။
Waxing လုပ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ အပူပေးလို့ရတဲ့ ဖယောင်းဘူး၊ အပူပေးတဲ့ ကိရိယာ၊ waxing strip လို့ ခေါ်တဲ့ wax ဖယောင်းကိုအသားပေါ်ကပ်ပြီးရင် ကပ်ပြီးခွာလို့ရတဲ့ စက္ကူအမာပြားလေးတွေဟာ စတိုးဆိုင်တော် တော်များများမှာ အလွယ်တကူရလာလို့ တစ်ချိူ့အလုပ်များတဲ့လူတွေဆိုရင် ဆိုင်မသွားဘဲ အိမ်မှာပဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်Waxing လုပ်လာကြပါတယ်။Waxing တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်လုက်လာကြတဲ့အခါ ဘာတွေသိထားရမလဲဆိုတာ လိုလာပါပြီ။
ခဏခဏလုပ်ဖို့မလိုဘူး၊ တစ်ခါ waxing လုပ်ထားရင် အမွှေးပြန်ပေါက်ဖို့ ၃ပတ်လောက်ထိကြာတယ်။
ကြာရင် မလိုတဲ့အမွှေးတွေ အထွက်နှေးလာသလို။ ပါးလာမယ်။ (သူက မွှေးညှင်းပေါက်တွေကို ပျက်စီးစေလို့ပါ)
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိစေတယ်။ ( ကိုယ့် အမွှေးတွေအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးလေ)
အမွှေးရိတ်သလို ဓားထိမှာ၊ အမွှေးငုတ်စိလေးတွေကျန်ခဲ့မှာမပူရဘူး။
အလေ့အကျင့်ရှိသွားရင် အိမ်မှာတင် အချိန် ၁၀ မိနစ်လောက်ပေးလုပ်လို့ရတယ်။
ခြေသလုံးမွှေး၊ ဂျိုင်းမွှေး၊ လက်ဖျံမွှေးအပြင် Bikini ဝတ်တဲ့ မမတွေအတွက် Bikini Waxingလို့ခေါ်တဲ့ဆီးခုံပေါ်က အမွှေးတွေကိုပါ ဖယ်ရှားနိုင်တယ်။
အမွှေးတွေကို တစ်ချက်ထဲ ( waxing Strip တစ်ပြားထဲ) ဗြန်းကနဲ့ ဆွဲခွာလိုက်တာဆိုတော့ တွေးကြည့်စရာမလိုအောင်ကို နာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများအားဖြင့်လုပ်တဲ့နေရာတွေက အသားနုတွေမဟုတ်လို့ ဒီနာတာလောက်ကို ခံနိုင်ရေရှိကြပါတယ်။
သဘာဝပစ္စည်းတွေကို အခြေခံလုပ်ထားလို့ ( အိမ်သုံးသကြား၊ ပျားရည်နဲ့တောင်လုပ်လို့ရတာမို့)အကြမ်းအားဖြင့် အခြား အမွှေးကျွတ်တဲ့ ခရမ်တွေလောက်မဟုတ်ပေမယ့် မွှေးညှင်းပေါက်တွေပျက်စီးစေပါတယ်။
Strip ပြားခွာတဲ့အချိန်မှာ အားနည်းရင် အမွှေးမပါနိုင်သလို၊ အားများရင် မွှေးညှင်းပေါက်နေရာကသွေးထွက်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဟာကိုယ်မလုပ်ရဲတဲ့သူတွေအဖို့ ဆိုင်ကို အချိန်ပေးသွားပြီး လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမွှေး ငုတ်တိုလေးတွေဆ်ု လုပ်မရသလို၊ လိုအပ်တဲ့အရှည်ကိုစောင့်ရတာမို့ ကြားထဲမှာ သွားစရာရှိလို့ဆိုရင်တော့ Waxing လုပ်မရနိုင်ပါဘူး။ကဲ ဒီလောက်ဆို Waxing အကြောင်း ကောင်းမကောင်းသိပြီလို့ ယူဆပါတယ်နော်။